रियाको गोप्य ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक, किन तोडिछन् सुशान्तसँगको सम्बन्ध ? - Halkara News
एजेन्सी ६ भाद्र २०७७, शनिबार १८:३६ 669 पटक हेरिएको
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु प्रकरणबारे सीबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सीबीआईले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने उनको हत्या वा आत्महत्या के हो र किन त्यो अवस्थामा पुगे सुशान्त भनेर बलिउडमै गरमागरम बहस पनि भइरहेको छ।
यसैबीच घटनामा थप नयाँ ट्वीस्ट आएको छ, जुन अभिनेता सुशान्तकी प्रेमिका भनिएकी रियाको ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक भयो। ८ जूनमा जब रिया सुशान्तको घरबाट निस्किएकी थिइन् तब उनले निर्देशक महेश भट्टसँग कुराकानी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उनले महेश भट्टसँग आफ्नो र सुशान्तको सम्बन्धबारे कुरा गरेको स्रोतले बताएको छ। उक्त च्याट भाइरल हुनेबित्तिकै मानिसहरुले रिया आफैंले सुशान्तसँग सम्बन्ध तोडेको अनुमान गरिँदैछ।
रियाले आफ्नो बयानमा सुशान्तले भनेपछि ८ जूनपछि उनको घर छोडेर गएको र यस्तो गर्दा आफू कत्ति पनि खुसी नभएको बताएकी थिइन्। सुशान्तले आफ्नी दिदी मितू सिंह उनको घरमा आउन लागेको बताएपछि रियालाई घर छोड्न भनिएको उनले आफ्नो बयानमा बताएकी थिइन्। तर अब रिया चक्रवर्तीको ह्वाट्सएप च्याट लिक भएपछि भने कुरा अन्तै मोडिएको छ।
महेश भट्टले भनेपछि रियाले सम्बन्ध तोडिन्?
८ जूनमा सुशान्तको घर छोडेपछि रियाले महेश भट्टलाई मेसेजमा लेखेकी थिइन्, ‘आयशा अघि बढेकी छे सर, भारी मन तर शान्तिका साथ। तपाईंसँगको अन्तिम कुराकानीले मेरो आँखा खोलिदिएको थियो। तपाईं मेरो ‘एन्जल’ हुनुहुन्छ। तपाईं त्यतिबेला पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ।’
त्यसपछि महेश भट्टले रियाको यो मेसेजको जवाफ पनि फर्काएका छन्। उनले रियालाई जवाफ दिँदै लेखेका छन्, ‘अब पछाडि फर्कने काम नगर। तिम्रो पितालाई मेरो प्रेम देऊ। अब उहाँ निकै खुसी हुनुहोला।’ अब महेश भट्टले कुराकानीको क्रममा रियाका पितालाई ल्याउनुको अर्थ नायिकाका पिता यो सम्बन्धले खुसी थिएनन्।
यस्तै, भाइरल च्याटमा रिया लगातार महेश भट्टलाई धन्यवाद दिइरहेकी छिन्। एक मेसेजमा रियाले महेशका लागि लेखेकी छिन्, ‘तपाईंले पुनः मलाई स्वतन्त्र पारिदिनुभएको छ। तपाईं मेरो जीवनको भगवान जस्तै हुनुहुन्छ।’ यस्तै महेश भट्टले पनि रियालाई आफ्नी छोरी समान बताइरहेका छन्। उनले यति हिम्मत देखाएको भन्दै रियाको तारिफ पनि गरेका छन्।
पहिलोपटक अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिमा महिला
अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर १२
चुनाव हार्ने देखेपछि धाँधलीको
अमेरिकामा राष्ट्रपतिको लागि मतदान